အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မက်မွန်ငါးပေါင်းနဲ့ အာလူးထမင်းနယ်
ထမင်းပျော့ပျော့ကို ဇလုံထဲခူးထည့် အာလူးနဲ့ ဆီချက် ခရမ်းချဉ်သီးချက် စသည်အဆာပလာများနဲ့ ဆား၊ အရသာမှုန့်တို့ ထည့်ပြီး နယ်ပါတယ်.
နယ်ပြုပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ အာလူးထမင်း
တကယ်တမ်းတော့ ငရုပ်သီးကြော်နဲ့ ပိုပြီးလိုက်ဖက်သော်လည်း အဲဒီနေ့က အိမ်မှာ ငရုပ်သီးအခြောက် ကုန်နေတာမို့ ငရုပ်သီးစိမ်းနဲ့သာ တွဲဖက် စားလိုက်ရပါတယ်ရှင်..
ဒီမနက်မှ အာလူးထမင်းနယ်ကို ပြန်တင်လို့ ရတာမို့ တင်လိုက်ပါပြီ။ အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော Weekend ဖြစ်ကြပါစေရှင်...
25 Responses to “မက်မွန်ငါးပေါင်းနဲ့ အာလူးထမင်းနယ်”
ဒါနဲ့ ဘယ်မှာတုန်း ငါးထမင်းနယ်က
Wow... အရသာ ရှိလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း...၊ မက်မွန်သီး တွေ ဒီမှာလည်း စ,ပေါ်နေပြီဗျ၊ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဟင်းချက်စားတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး၊ မချောက တော်လိုက်တာ....။း)
မက်မွန်သီး စားချင်တယ် ချောရေ စတိုင်တမျိုးနဲ့ချက်နည်း ကို မှတ်သားသွားတယ်နော
စောစောစီးစီး မနက်စာမစားရသေးခင်ဖတ်မိလို့ အာလူးထမင်းနယ်နဲ့ မက်မွန်သီးငါးပေါင်း အကုန်ဆွဲသွားတယ်း)) ကျေးဇူးနော် ချော..။
တို့က မက်မွန်သီးဆို သိပ်ကြိုက်တာ ငါးပေါင်းလေး တော်တော်စားကောင်းမယ့်ပုံပဲ.....။
မက်မွန်ငါးပေါင်း နဲ့ အာလူးထမင်းနယ်ကို အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်လုပ်စားကြည့်မယ် နည်းပညာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်
မချောကို ဒါမျိုးပို့စ်တွေ မြင်တိုင်း အမပဲ လှမ်းတော်လိုက်ချင်တယ်.. :P
Remind me of my childhood days.
with love/nang myint
Love to eat both dishes, thanks Chaw!!!
အမကတော့ ပုံတွေနဲ့ နှိပ်စက်နေတယ် ဗိုက်ဆာတုန်း မဖတ်ရဲဘူး ဗျ :P
မချောရေ မချောရေ အာလူးထမင်းလုပ်စားမယ်။
ပဲပုတ်ကြော်အမှုန့်တော့ မရှိလို့ ကျန်တာနဲ့လုပ်စားမယ်။
(ကွန်မန့်လေးရိုက်တာတောင်မနည်းရိုက်နေရတယ်၊ ကီးဘုတ်ပေါ်ခိုတက်နှောင့်ယှက်နေလို့ ခိုကလေးလေးတစ်ကောင် မချောရေ)
ညီမ ရဲ့ မက်မွန်သီးငါးပေါင်း ကိုတော့ ကြိုက်မှာ သေချာပါတယ်
ချောရေ မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်းလေးပါနော်...မက်မွန်ငါးပေါင်းရော အာလူးထမင်းနယ်ပါ...အားရပါးရ တွယ်ပစ်လိုက်တယ်...ကောင်းမှကောင်း ချောရေ... အော် ဒါနဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်မှာ မက်မွန်သီးက အမွေးစုတ်ဖွားနဲ့ (အရမ်းတော့ မရှည်ပါဘူး၊ အမွေးတွေပါတယ်...)ချောတို့ဘက်က မက်မွန်သီးက စင်းလုံးချောကြီးပါလား...အရောင်အသွေးက ပိုလှတယ်ဗျာ...ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်က မက်မွန်သီးရဲ့အရောင်က...မြင်းချေးရောင်ကြီး...မလှဘူး...ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြပါစေ...
^^Winnie Pooh Lovers said...
အာလူး ထမင်းနယ်... ချော ပြောတာနဲ့ လုပ်စားချင်သွားတယ်... ခုပဲ အိမ်မှာ အာလူး ရှိ မရှိ သွားကြည့်လိုက်မိတယ်... အာလူး ၄ လုံးတွေ့တယ်... မနက်ဖြန်... မနက်ဖြန်...း))
ညီမ ချောရေ ငါးပေါင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။ စမ်းသပ်စရာ တစ်မျိုးရသွားပြီ။ ကျေးဇူးနော်။ ငါးသံပုရာပေါင်းတော့ ညီမဆီကနည်းအတိုင်းလုပ်စားတာ အရမ်းကောင်းတာဘဲ။
ဂျူးမြစ်လေးတွေနဲ့ဗျာ... စားချင်စရာလေး။ ရှမ်းပြည်မှာတုန်းက ငါးထမင်းနယ်လေး သတိရလိုက်တာ.. ။ ငါးမက်မွန် ပေါင်းတော့ တရေပဲ ကျသွားတယ်... ။ မလုပ်နိုင်ဘူးထင်လို့ ။ ဟီး။
အသစ်အဆန်းဟင်းလေးတွေဆိုတော့ စားကြည့်ချင်သား။ နေ့တိုင်း ဘာစားရင် ကောင်းမလဲ တွေးရတာ တော်တော်ပင်ပန်းပါ့။
စားချင်လိုက်တာ .. :D